Farmaajo iyo Khayre oo isbaaro dadban u dhigtay kulankii Baarlamaanka ee Maanta – Idil News
Farmaajo iyo Khayre oo isbaaro dadban u dhigtay kulankii Baarlamaanka ee Maanta
Gudoonka Golaha Shacabka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inuu baaqday kulankii maanta ay magaalada Muqdisho ku yeelan lahaayeen Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Soomaaliya.
Arrintan ayaa timid kaddib markiii uu buuxsami waayay kooramkii loogu tagalay inuu ku furmo kulanka xildhibaannada baarlamaanka.
Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Soomaaliya, Maxamed Cismaan Jawaari, oo jeediyay hadal kooban ayaa sheegay inay jiraan xildhibaano yimid haddana aan saxiixin buuga taasina ay ka dhalan doonto cawaaqib xumo.
Ciidamo milateri iyo boolis isuga jira ayaa la soo dhoobay waddoooyinka muhiimka ah ee magaalada iyadoo inta badan waddooyinkuna ay xirnaayeen maanta.
Xildhibaannada qaar ayaa ku eedeeyay xukuumadda in taasi ay uga gol-laheyd in xildhibaannada ay u suurageli wayso inay yimaadaan dhismaha baarlamaanka.
Sidoo kale weriyayaasha ayey ku adkaatay inay tagaan dhismaha baarlamaanka kaddib markii ay saameyn ku yeelatay waddooyinka xiran.
Waxaa lagu waday in maanta ay xildhibaanada Golaha Shacabka ee Soomaaliya ka doodaan go’aankii 6-dii bishan ka soo baxay golaha wasiiradda ee xukuumadda Soomaaliya ee lagu dhiibay Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi-dhagax.
Xildhibaanada Soomaaliya ayaa arrintan si weyn ugu kala ra’yi duwan, iyadoo qeyb ka mid ah xildhibaanadu ay taageersan yihiin go’aanka xukuumadda oo ay sheegeen inay aheyd tallaabo sax ah halka kuwa kale ee ka soo horjeeda ra’yigaasna ay go’aanka Golaha Wasiirada ku tilmaameen inuu ahaa khiyaamo qaran.
Arbacadii ayey aheyd markii Golaha Wasiirada Soomaaliya ay si aqlabiyad ah ku go’aansadeen in dhiibistii Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax uu ahaa mid loo maray sharciga.